$10 kun oo doolar maku bixin lahayd daawashada arooskii Amiir Harry iyo Meghan? - BBC News Somali
Dadka u daawasho tagay arooska
Adiga oo gurigaaga jooga ayay kuu suurtogali lahayd in dhaladaada aad si sahlan uga daawato arooskii boqortooyada Ingiriiska ee dhacay 19-kii bishan. Balse dad ladan oo ku nool caasimadda Kenya ee Nairobi ayaa doorbiday in ay lacag ku bixiyaan daawashada arooska.
Sida ay baahinayso warbaahinta dalka Kenya, hoteelka Windsor Golf Hotel ayaa soo agaasimay munaasabad dadka qofkiiba laga kireynayay daawashada arooska oo si toos ah looga baahinayay taleefishinada adduunka.
Qof kasta waxa uu bixiyay $10 kun oo doolar, waxaana dhacday in goobtii loogu talogalay ay buuxsantay, dad badana ay gateen tigidhada qaaliga ah.
Hotelka ayaa waxa uu ku magac yahay magaaladii uu arooska ka dhacay
Marka laga tago in ay shaashad weyn ka daawdeen arooska, waxa ay macaamiisha heleen adeegyo kale oo ay ka midyihiin in diyaarad lagu geeyay buurta Mount Kenya , halkaas oo quraac qaas ah ay kasoo cuneen maalintii xigtay arooska.
Lammaane ka mid ahaa dadkii meesha tagay ayaa sheegay in ay meesha uga qaybgaleen si ay fikir uga soo qaataan qabanqaabada arooskooda oo ay qorsheynayaan.
Dadka qaarkood ayaa soo xirtay dharkii arooska markii ay ka qaybgalayeen arooska.
Haweenay ayaa soo xiratay cambuurka arooska
Dhakhtar qalliin sameynayay oo maxkamad uga soo biiray Zoom
TOOS Wasaaradda caafimaadka oo soo jeedisay in xayiraad hor leh lagu soo rogo dalka
Trump: "Biden waxa uu ku fashilmay bishii u horreysay xukunkiisa"